Xtensio: Mepụta, Jikwaa, ma Wepụta Nchịkọta Ọrụ Gị | Martech Zone
Xtensio bụ a ika atụmatụ na nkwukọrịta ehiwe ebe òtù mejuputa na hazie ahịa mgbalị gafee esịtidem otu, ahịa na ndị mmekọ. Mee ma soro onye editọ kerịta ihe ọ bụla ị chọrọ. Mgbapụta gị na-agbanwe ka ọrụ gị si agbanwe. Ma ị na-ahazi nnukwu mkpọsa mkpọsa, na-eme ka nkwukọrịta dị n'ime gị dịkwuo mma, ma ọ bụ na -emepụta akụkọ na ọmụmụ ihe, Xtensio bụ ebe ọrụ ndị otu gị na-aga.
Mepụta Mgbakwunye Ahịa Ahịa Na-enweghị Onye Mmebe
na Xtensio, gị otu nwere ike iru ihe ọ bụla si stratejik ahịa personas, amụma, nkwado atụmatụ na ọdịda peeji nke na ala nke a na-ewu weebụ. Jiri ngwa ngwa, weghachite ma hazie ọdịnaya maka mkpọsa dị iche iche. Uru dị na ya:
Chekwa oge na imewe - Onye ọ bụla nọ n’otu ahụ na-emepụta ihe. Dọrọ na dobe mmekọrịta mmekọrịta - onyonyo, vidiyo, eserese, eserese. Gbanwee agba, ndabere ma ọ bụ nha. Gbanwee nhazi ma ịchọrọ.
Na-agbasi mbọ ike imepụta ihe - Kọwaa otu ụdị ụdị nduzi gị na akwụkwọ ozi ụlọ ọrụ na palette agba iji kpochie akara ngosi gafee otu ahụ. Hazie njikọ ejikọtara ma gbakwunye okwuntughe iji chekwaa ụlọ ọrụ nke ụlọ ọrụ gị ma chebe ya.
Mee ka otu mmekorita - Na-arụkọ ọrụ ọnụ dịka otu gafee ngalaba na njikwa. A na-echekwa mgbanwe niile ma mekọrịta ha n'ofe ngwaọrụ niile. Onye ọ bụla na-eme ihe ọ bụla mgbe niile ma igbe mbata gị enweghị ego.
Anyị kwesịrị inwe ebe iji rụkọta ọrụ, ma chọkwara ka anyị gosi ndị ọzọ ozi. N'oge gara aga, anyị ejirila Asana rụọ ọrụ ọnụ, yana PowerPoint gosi ndị ọzọ ihe ha metụtara. Xtensio dochiri mkpa ọ dị maka ma amamiihe. Anyị nwere ike ịrụkọ ọrụ ọnụ, kesara otu mgbe na-enweghị izipu mgbakwunye na ị ga - echekwa ụdị dị iche iche nwere aha pụrụ iche - gị niile maara na egwu ahụ - wee jiri otu ngwa ọrụ iji chee.
David Nason, CEO / Onye guzobere HireBrain
Ugbu a, Kee, ma budata Njikọ Gị
Iji mee ka mmekorita ya na ndị na-eme mkpebi ma ọ bụ ndị ahịa na mpụga, Xtensio na-enye ikike:
Kekọrịta weblink dị ndụ - Zipu ihe nnochi anya di nkpa dika njikọ webusaiti. Tinye nchedo okwuntughe. Agaghị eziga ọtụtụ mgbakwunye na nsụgharị na mmelite ọ bụla na dọkụmentị.
Weta ihe ngosi mmịfe dijitalụ - Otu Pịa, folio gị ga-aghọ ihe ngosi mmịfe dijitalụ. Wepụta ihe na-emekọ ihe na mmekọrịta gị na ebe ọ bụla. Akụkụ folio ọ bụla na-aghọ slide.
Download PDF ma ọ bụ PNG faịlụ - N’agbanyeghi otua isi gbalịa igafe na dijitalụ, ufodu ihe nnochi anya gha aghaghi azoputa ya dika ihe odide siri ike. Mbupụ gị niile folio ma ọ bụ onye ọcha dị ka PDF ma ọ bụ PNG faịlụ
Banye maka Xtensio
Kpọtụrụ ebe ọrụ nzuzo maka ụlọ ọrụ gị na ndị ahịa gị
Xtensio maka Azụmaahịa na-enye ebe ọrụ nzuzo na akara aha maka ijikọ mmepe, ngwaahịa, ahịa na ndị ọrụ njikwa yana ozi ha chọrọ.
Mfe hazie ihe nnyefe - alizingmekọrịta nzụkọ ahịa maka ndị na-ege ntị na ntanetị dị iche iche dị mfe. Chekwaa folio ọ bụla dị ka ndebiri maka otu gị ka ịmegharị ugboro ugboro. Nwere ike ibipụta ya na webụsaịtị gị iji wuo akara gị.
Mee ka onye ọ bụla kwekọọ - Hazie ọrụ na akwụkwọ gị site na ọwa - mkpọsa, ngalaba, onye ahịa, akụkọ, wdg. Tinye ndị na-emekọ ihe ma ọ bụ kekọrịta njikọ channelụ ka onye ọ bụla nwee ohere ha chọrọ, mgbe ha chọrọ ya.
Na-emeri kwa ụbọchị - Sochie usoro ọrụ otu gị na amamọkwa ngwa ma sorokwa egwu egwu na folị folio. Ga-enwe ike ịhazigharị usoro gị iji rụọ ọrụ nke ọma ma mata ohere ọhụụ ọhụụ.
Debanye aha maka Xtensio maka Azụmaahịa
Xtensio pkpụrụ Akwụkwọ
Nwere ike ibido mgbe nile site na oghere efu ma ọ bụ ịnwere ike iji ndebiri Xtensio na akụrụngwa maka usoro dị iche iche nke itinye usoro mmepe gị - site na ikpughe ezigbo ndị ahịa gị na ngwaahịa kwesịrị ekwesị iji mepụta atụmatụ na ọkwa ma ọ bụ mmemme ime ụlọ, akụkọ ire ahịa na azụmahịa ndị ọzọ onye nnochi anya.
Ngosipụta: Anyị bụ Ndị mmekọ Xtensio.
Tags: wuo ulo oru ntanetiNjikwa nkwaihe ndebiriihe okikehirebrainnyocha ihe okikeonline pdf mmebeihe ngosi ntanetịonye na-eme atụmatụ ntanetịNkeji